‘हिरोज्’ को ट्रेलर सार्वजनीक, किन स्टेजमै रोइन् पूर्णीमा ? – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainment‘हिरोज्’ को ट्रेलर सार्वजनीक, किन स्टेजमै रोइन् पूर्णीमा ?
‘हिरोज्’ को ट्रेलर सार्वजनीक, किन स्टेजमै रोइन् पूर्णीमा ?
March 5, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
हिरोज् फिल्मको ट्रेलर सार्वजनीक गरिएको छ । पूर्णीमा लामाको निर्माण अनि एनबि महर्जनको निर्देशनमा बनेको हिरोज्को आइतबार राजधानीमा प्रेसमिट गरि ट्रेलरसहित फिल्ममा समाबेश चार वटा गीत प्रदर्शन गरिएको हो । चैत्र २३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्मको प्रेसमिटमा अभिनेत्री तथा निर्मात्री पूर्णीमाले आफू चाहेर निर्माता नबनेको खुलासा गरिन् ।
‘मैले हिरोज् बनाउदा धेरै दुःख पाएँ । पैसाले मात्रै फिल्म बन्दो रहेन्छ,’ उनले रुँदै भनिन्,‘मिहीनेतअनुसार फिल्म निकै राम्रो बनेको छ । फिल्ममा बेरोजगारीको पीडा, मानव बेचबिखन, समाजीक भेदभाव र न्यायको लागि संघर्षको कथा प्रस्तुत गरेका छौ । त्यसैले दर्शकले मन पराउनेमा बिश्वस्त छु ।’ कार्यक्रममा अभिनेत्री करिश्मा मान्नधरले आफूलाई हिरोज्को स्क्रिप्ट निकै मन परेको बताइन्छ ।
‘हिरोज्मा मनोरञ्जन मात्र नभइ समाजोपयोगी सन्देश पनि छ । त्यसैले मैले निकै मन लगाएर काम गरेकी छु,’ हिरोज्को आफू पनि एउटा हिरो भएको बताउदै उनले भनिन्,‘फिल्म राम्रो बनेको छ । आम दर्शकलाई यो फिल्मले छुने बिश्वास मलाई छ ।’फिल्मका एक अभिनेता तथा कथाकार संजोग राणाले कार्यक्रममा निर्देशक एनवी महर्जन उपस्थित नभएकोमा चित्त दुखाए । ‘उहाँले आफूले बोलेको कुरा पुरा गर्न सक्नु भएन । त्यसैले हामीले बारम्बार खबर गर्दा पनि आउनु भएन । उहाँलाई धन्यावाद ।’ उनले भने ।
त्यसैगरी, फिल्मका अर्का निर्माता शेखर लामाले आफूहरुले निकै मिहीनेत र ध्यान लगाएर फिल्म निर्माण गरेको भन्दै सुखद अपेक्षा राखेको बताए । उनले पनि कार्यक्रममा निर्देशक महर्जनको अनुपस्थितिमाथि कटाक्ष गरे । भने, ‘उहाँ आइदिएको भए दुखसुखका कुरा गर्नु हुन्थ्यो । आउनु भएन । ठिकै छ । हामी आफ्नो तवरले अघि बढेका छौ ।’ हिरोज्मा करिश्मा मान्नधर, जयकिसन बस्नेत, पूर्णीमा लामा, संजोग राणाका साथमा कमली वाइवा,मुकेश ढकाल, दिलकृष्ण श्रेष्ठ,सहिन प्रजापति,दिनेश डिसीलगायतले अभिनय गरेका छन् ।
शंकर महर्जनको द्धन्द्ध निर्देशन रहेको फिल्म शिब ढकाल र रामशरण उप्रेतीले खिचेका हुन् । जय लक्ष्मी फिल्मस्को ब्यानरमा निर्मित ‘हिरोज’ को प्रस्तुतकर्ता लक्ष्मी लामा छिन् । फिल्मको निर्मातामा युवराज लामा, शेखर लामा र संजोग राणा छन् । फिल्ममा कबिराज गहतराज र रामजी लामीछानेको कोरियोग्राफी छ । फिल्म सुनील मानन्धर, रोहीत कट्टेल र रत्न श्रेष्ठले बितरण गर्दैछन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सेनापतिसम्म माग्नेबुढाको छोराको व्रतबन्धमा, तर, किन भए माग्नेबुढा नतमस्तक ? (भिडियो/फोटोफिचर)